Mareykanka:- “Waxaan Duqeyn Ku Dilnay Saraakiil Shabaab Ah” – Hornafrik Media Network
Mareykanka:- “Waxaan Duqeyn Ku Dilnay Saraakiil Shabaab Ah”
Muqdisho-Hornafrik=War Qoraal ah oo ka soo baxay Saraakiisha militariga Dowlada Mareykanka ayaa faah faahin looga bixiyay Duqeyn ay Diyaaradaha dagaal ee dowladaasi ay ka fuliyeen Deegaan u dhaw Degmada Jilib ee G/Jubada Hoose.
Warkan oo si gaar ah uga soo baxay taliska Ciidmaada Mareykan ee Africa oo AFRICOM loo yaqaano ayaa lagu xusay in ay duqeynta ku dileen sadex Sarkaal oo Shabaab ahaa sidoo kalena waxaa ay ku cadeeyeen qoraalkooda in aysan Duqeynta Diyaaradeed ee ay fuliyeen waxba ku noqon dad shacab ah.
“Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee ay wateen Ciidamadeen ayaa waxa ay Duqeyn ka fuliyeen meel ku dhow degmada Jillib, waxayna ku dileen Saddex Argagixisada ka tirsanaa, dad shacab ah Howlgalka khasaare laguma gaarsiin.” Ayaa lagu yiri Qoraalka (AFRICOM).
Mareykanka ayaa Koonfurta Soomaaliya waxaa uu ka fuliyaa Duqeymo uu la eegato fariisimo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-shabaab ee xoogooda ka dagaalama Koonfurta Soomaaliya.
Sawiro-Taliyaha Cusub ee NISA oo xilka Si Rasmi ah ula Wareegay.
Ethopia oo Maanta sii Deyneysa Maxaabiis Badan oo ONLF ah.